नेपाललाई भारतीय उपमहाद्वीपकै प्रशिक्षक उपयुक्त | | Neplays.com
नेपाललाई भारतीय उपमहाद्वीपकै प्रशिक्षक उपयुक्त
नेपाली क्रिकेट टिम प्रशिक्षकविहीन भएको लामो समय भइसक्यो । गत माघमा काठमाडौंमा भएको नेपाल, ओमान र अमेरिकाबीचको विश्वकप लिग टु को त्रिकोणात्मक सिरिज पछि तत्कालिन प्रशिक्षक उमेश पटवालले राजीनामा दिए ।
आईसीसीले भारतीय प्रशिक्षक पटवाललाई एक वर्षकालागि नेपाली टिमको जिम्मा दिएको थियो । तर उनी ४ महिनाको कार्यकाल बाँकी छदै पदबाट राजीनामा दिएर विदा भए ।
उनी मासिक ७ हजार डलर पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधासहित काठमाडौं आएका थिए । उनले प्रशिक्षक पदबाट राजीनामा दिए पछि नेपाली क्रिकेट टिम प्रशिक्षक विहीन अवस्थामा छ ।
नेपाली क्रिकेटको मातृ संस्था नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)मा राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले सन् २०१६ देखि निलम्बन गरेको थियो । क्यानले निषपक्ष चुनाव गराउन नसकेपछि राजनीतिक हस्तक्षेप भएकाे थियाे । २०१४मा आर्थिक पाटाे राेक्का गरेकाे आईसीसीले २०१६ मा प्रतिबन्ध नै लगायाे ।
त्यसयता प्रशिक्षक आईसीसीले नै पठाउने र खेलाडीको ग्रेडिङ पनि उसैले गरेको थियो । निलम्बनकै बीचमा नेपालले ४ वर्षका लागि एकदिवसीय मान्यता पनि पाएको छ । अब त्यो मान्यता सन् २०२२ सम्म मात्रै हो ।
पूर्व प्रशिक्षक उमेश पटवाल
नेपालको अबको लक्ष्य टेष्ट मान्यता अर्थात आईसीसीको पूर्णकालीन सदस्य राष्ट बन्नु हो ।
तर पछिल्लो समय मैदान भित्रको प्रदर्शन र मैदान बाहिरको राजनीतिले यो बाटो सहज देखिएको छैन । त्यसमाथि झन्डै ९ महिनादेखि मुख्य प्रशिक्षकबिहीन हुनु पनि बिडम्बना हो ।
भलै कोरोना भाइरसको महामारीले क्रिकेट गतिविधि हुन सकेको छैन ।
जिल्ला र प्रदेशबाटै शुद्धीकरण हुँदै आएको क्यानको संरचना गत असोजमा काठमाडौंमा केन्द्रीय निर्वाचनमा आएर सकियो । त्यसपछि आईसीसीले आंशिक रुपमा क्यानको निलम्बन फुकुवा गरेको हो । अहिले कार्यसमितिले काम गरे पनि आईसीसीको प्रत्यक्ष संग्लग्नता आवश्यक पर्छ ।
अहिले क्यानले प्रशिक्षकको लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । गत साता प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सेप्टेम्बर २३ तारिखभित्र आवेदन दिनुपर्ने छ । क्यानले वेबसाइटमा विज्ञापन प्रकाशित गरेकाले पनि यो विश्वव्यापीरुपमा इच्छुक उम्मेदवारले दरखास्त दिन सक्ने छन् ।
प्रशिक्षकका लागि लेभल थ्री कोर्ष गरेको हुनुपर्ने, कम्तिमा तीन वर्ष आईसीसीको पूर्ण सदस्य टिमको प्रशिक्षक भएको, प्रथम श्रेणीको टिम, विदेशी फ्रेन्चाइज लिग मध्य कुनै एकको प्रशिक्षक भएको हुनुपर्ने र क्रिकेटिङ कल्चर बुझेको भनेर योग्यता तोकिएको छ ।
यसमा कतिले दरखास्त दिए भन्ने कुरा २३ सेप्टेम्बरको समय सकिएपछि क्यानले नै सार्वजनिक गर्नेछ । तर कतिपयले क्यानले जारी गरेको सार्वजनिक सूचना नै विधानसम्बन नरहेको भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
प्रशिक्षक बन्न नेपालमा तीनजना व्यक्तिहरु योग्य देखिए पनि उनीहरु तीनैले चासो दिएका छैनन् । क्यान पनि खेलाडीको मनोभावना अनुसार सकेसम्म बिदेशी प्रशिक्षक नै अनुबन्ध गराउने कसरतमा छ । यसका लागि आईसीसीसँग समन्वय भइरहेको भनिएको छ ।
त्यसो भए नेपालली राष्ट्रिय टिम र नेपालको परिवेश सुहाउँदो प्रशिक्षकको नियुक्ति कसरी गर्ने त ? हामीले क्रिकेट विश्लेषक, पूर्व प्रशासक, कप्तान लगायतसँग कुरा गर्दा सबैको राय भारतीय उपमहाद्वीपकै प्रशिक्षकले नेपाली टिमको नेतृत्व गर्न सक्ने धारणा राखे ।
इतिहास हेर्दा पनि नेपालमा भारतीय उपमहाद्वीपकै प्रशिक्षक प्रभावशाली छन् । भाषा, संस्कृति, रहनसहन र यस क्षेत्रको विकेटसँग परिचित तथा विश्व क्रिकेटको महाशक्ति राष्ट्रहरु भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका यही क्षेत्रमा पर्ने भएकाले पनि स्तरीय प्रशिक्षकका लागि गोरो अनुहारको पछि लाग्नु आवश्यक नहुनेमा सबैको मतएैक्यता छ ।
सन् १९९६ मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू गरेयता नेपालमा ६ जना बिदेशी प्रशिक्षकले प्रशिक्षण गराएका थिए । तीमध्ये ५ जना भारतीय उपमहाद्वीपकै रहे । सन् १९९६ को एसीसी ट्रफीयता नेपालले लामो समयसम्म दुई वर्षको अन्तरमा हुने यही प्रतियोगितामै सीमित रह्यो । यसबीचमा पाकिस्तानका फारुक जमान र भारतका वीरेन्द्र भट्नाकरले नेपालको टिम संहाले ।
सन् १९९८ मा नेपालले कीर्तिपुर मैदानमा एसीसी ट्रफीको आयोजना गर्दा नेपाली टिमको प्रशिक्षक अस्ट्रेलियाका ब्रेन विगिङ्स थिए । यी तीनैजना प्रशिक्षकको नियुक्ति क्यानको सम्बन्धको आधारमा सम्बन्धित देशका क्रिकेट संघले उपलब्ध गराएर भएको थियो ।
सन् २००१ मा श्रीलंकाली प्रशिक्षक रोय लुक डायस आईसीसीको माध्यमबाट नेपालमा आएका हुन् । झन्डै १ दशक नेपालमा विताएका उनले नेपाली क्रिकेटको अहिलेको सफलताको आधार खडा गरेका थिए । ट्वान्टी ट्वान्टी विश्वकपसम्म पुग्ने तथा नेपाललाई एकदिवशीय मान्यता दिलाउनेमध्येका महत्वपूर्ण सदस्य पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद भेषावकर, शक्ति गौचन, बसन्त रेग्मी लगायतका क्रिकेटरको उत्पादन र क्षमता पहिचानको श्रेय उनैलाई दिने गरिएको छ ।
डायसको बहिर्गमनपछि श्रीलंकाकै पुवुदु दाशानायकेले सन् २०११ देखि ४ वर्ष नेपालको जिम्मेबारी संहाल्दा डायसको सपना पूरा गरेरै छाडे । यसबीचमा नेपालले आफूले खेलेकामध्ये अधिकांश प्रतियोगिता जित्यो । नेपाल विश्व क्रिकेटमा पहिचानसहित उदायो । विश्वकप खेल्यो । आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन वानसम्म आइपुग्यो ।
पूर्व कप्तान एल.बी क्षेत्री
२०१५ मा उनी विदा भएपछिको २ वर्ष स्थानीय प्रशिक्षक जगत टमाटाले नै जिम्मेबारी संहाले । उनैको प्रशिक्षणमा नेपालले सन् २०१८ मा एकदिवशीय मान्यता पाएको हो । एकदिवशीय मान्यता पाएपछि खेलाडीको आग्रहअनुसार आईसीसीले भारतीय उमेश पटवाललाई मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेबारी दियो । पटवाल त्यसअघि नेपाली टिमको ब्याटिङ सल्लाहकारको रुपमा थिए ।
अहिले खेलाडीदेखि समर्थकसम्मले बिदेशी प्रशिक्षककै नियुक्तिको माग गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान एल.बी क्षेत्रीले घरेलु प्रशिक्षकहरु दवाव झेल्न इच्छुक नदेखिएका कारण बिदेशी प्रशिक्षकको आवश्यकता परेको बताउँछन् । नेपालले आफ्नो स्तरमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी टेष्ट मान्यता हासिल गर्न पनि अनुभवी बिदेशी प्रशिक्षकको आवश्यकता पर्ने उनको तर्क छ ।
उसो भए कस्ता प्रशिक्षकले नेपाललाई थप सफलता दिलाउन सक्लान् त ? ‘सार्क देशहरु भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा क्रिकेटले राम्रो विकास गरेको छ । सार्कका देशहरुसँग भाषा संकृतिलगायतमा एकरुपता छ ।
यही क्षेत्रका प्रशिक्षकले नेपाली खेलाडीको भावनाअनुसार प्रशिक्षण दिन सक्छन्,’ नेप्लेजसँगको कुराकानीमा उनले थपे, ‘मेरो बिचारमा भारतीय प्रशिक्षक अझ प्रभावकारी हुन सक्छन् । किनभने भारत विश्व क्रिकेटको सबैभन्दा प्रभावशाली देश हो । त्यसबाहेक हाम्रो संस्कृति समान छ । भारतसँगको सामरिक सम्बन्धमा पनि यसले सहज हुन सक्छ ।’
क्षेत्रीले क्रिकेट गतिविधि धेरै हुने ठाउँबाट प्रशिक्षक ल्याउने कुरामा पनि क्यानले बिचार गर्नुपर्ने ताए ।
‘नेपालले चार वर्षका लागि मात्रै एकदिवसीय मान्यता पाएको हो । यसलाई टिकाउँदै टेस्ट राष्ट्र बन्ने बाटो कोर्नुपर्ने चुनौती छ । हामीले प्रशिक्षक ल्याउँदा त्यो देशको ल्याउनुपर्छ जहाँ क्रिकेट गतिविधि अधिक होस् । त्यस्तो भयो भने नेपाली खेलाडीहरुलाई अभ्यासका लागि पनि ती ठाउँमा पठाउँदा उनीहरुले बढी भन्दा बढी एक्सपोजर पाउँछन्,’ उनले थपे ।
भारत हाम्रो छिमेकी देश भएकाले पनि त्यहाँको प्रशिक्षक ल्याउँदा हरेक कुराले उपयुक्त हुने नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व खेलाडी आमिर अख्तरको तर्क छ । उनले भारतीय प्रशिक्षकहरु अहिले अन्य टेष्ट राष्ट्रकै प्रशिक्षक भइसकेकाले त्यसको फाइदा नेपालले लिन सक्ने बताए ।
उनले भने, ‘भारतीय प्रशिक्षकहरु अहिले दक्षिण अफ्रिका, वेस्टइण्डिज, जिम्बावे र अफगानिस्तानको टिम सम्हालिरहेका छन् ।
पूर्व क्रिकेटर आमिर अख्तर
साथै अस्ट्रेलियाको राज्यस्तरको प्रशिक्षणमा पुगिसकेको छन् । विश्वको क्रिकेट संस्कृतिमा भारतको ठूलो योगदान रहेकाले पनि उनीहरुबाटै प्रशिक्षक ल्याउँदा फाइदा लिन सकिन्छ ।’
उनले भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्रबाहिरको प्रशिक्षकका लागि भाषा लगायतको समस्या परिरहने दावी गरे ।
नेपालको छिमेकी देश भएर पनि भारतीय क्रिकेटबाट त्यति धेरै फाइदा लिन सकेको छैन । अबको दिनमा क्रमश व्यवसाकियता तर्फ उन्मुख नेपाली क्रिकेटलाई अघि बढाउन र बीसीसीआईसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्न पनि त्यस्ता प्रशिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाई छ ।
साथै पारश्रिमिकका हिसाबले पनि धेरै कुरामा सहज हुने उनको बुझाई छ ।
क्यानकाे कार्यसमितीका पदाधिकारीद्वारा गाैतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाकाे निरीक्षण
क्यानको बोर्ड बैठक आज चितवनमा
आइपीएलमा बै‌ग्लाेरकाे बिजयी सुरुवात, हैदरावाद १० रनले पराजित
आईपीएलमा आरसीबीद्वारा सनराईजर्सलाई १६४ रनकाे लक्ष्य
हैदरावाद टस जितेर बलिङमा
आईपीएलमा आरसीबी र सनराईजर्स भिड्दै